I-china i-5 kwi-1 ityhubhu yokugcwalisa kunye nokutywina i-HX-005 mveliso kunye nabathengisi | Umatshini weHX
Ukunikezwa Amandla AC220V / 110V 1PH 50 / 60HZ
Ukuzalisa Uluhlu I-1-10ml ngeempompo ezi-5
Umthamo 10-15pcs / min
Ukutywina iDia. 13-50mm
Ukuphakama kweThubhu 50-100mm
Ukusetyenziswa komoya 0.35m3/ imiz
Ubukhulu L1300 * W1010 * 1550mm
* Umatshini wenzelwe ngokukodwa ityhubhu e-5 kwityhubhu e-1, efanelekileyo kwimveliso yobunzima be-5 kwi-1 ityhubhu.
* Yondla ngesandla ityhubhu yokondla, ukugcwalisa ngemilomo eyi-5 ngokuzenzekelayo, ukutywina, ukuphela kokucheba, kunye nokuhambisa ityhubhu.
* Yamkela itywina ye-ultrasonic yokutywina, akukho sidingo sokufudumeza ixesha, ukuzinza okuzinzileyo kunye nokucoceka okucocekileyo, akukho kugqwetha kunye nenqanaba lokulahla eliphantsi elingaphantsi kwe-1%.
* I-R ezimeleyo kunye ne-D yedijithali yokulandela umkhondo kwibhokisi yolawulo lombane, akukho sidingo sokuhlengahlengisa imvamisa, kunye namandla ombane womsebenzi wokhuseleko, ukuthintela ukuncitshiswa kwamandla emva kokusebenzisa ixesha elide. Ngaba ngokukhululekileyo uhlengahlengise amandla ngokusekwe kwityhubhu yezinto kunye nobukhulu, uzinzile kunye nobuncinci bezinga lesiphoso, wandise ixesha lobomi kunebhokisi yombane eqhelekileyo.
* I-PLC ngenkqubo yolawulo lokuchukumisa isikrini kunye ne-alam inokujonga ngokuthe ngqo ulwazi lwe-alamu kwiscreen sokuchukumisa, inokufumana ingxaki kwaye isombulule kwangoko.
* Isikhululo ngasinye sinokulawulwa ngokuzimeleyo kwiscreen sokuchukumisa, silungele uhlengahlengiso kumatshini. Abasebenzi banokusebenzisa ityhubhu enye yokuqhekeza ukuseta zonke iindawo, ukonga ixesha elininzi kunye nezinto eziphathekayo.
* Umgangatho oxhotyiswe ngenkqubo yokugcwalisa impompo ye-peristaltic, ukuzaliswa ngokuchanekileyo okuphezulu, okulungele ukuzaliswa kolwelo.
* Inkqubo yesalathiso seCam inokubeka ngokuchanekileyo kwizikhululo ezithandathu zokusebenza.
Isetyenziselwa ukutya, amayeza, izinto zokuthambisa, kunye neekhemikhali ezi-5 kwityhubhu enye yokugcwalisa nokutywina, ivolumu ukusuka kwi-1-10ml.
1. Iipompo zeCeramic zekhrim ephantsi ene-viscous kunye ne-essence
2. Iimpompo zomoya ze-ceramic zecream ephezulu
Egqithileyo Umatshini ogcwalisa umatshini wokugcwalisa ioyile-Ukugcwalisa iibhotile ezizenzekelayo kunye noMatshini wokufaka i-HX-20AF-Umatshini weHX
Okulandelayo: Iimilo ezizenzekelayo zeUltrasonic Tube Sealer yeeTyhubhu eziKhethekileyo zeHX-003